Lahm Oo Ka Walaacsan Xiddigaha Reer Brazil Ee Shakhtar
HomeChampions LeagueLahm Oo Ka Walaacsan Xiddigaha Reer Brazil Ee Shakhtar
Kabtanka kooxda Bayern Munich, Philipp Lahm ayaa soo bandhigay walaac ay kooxdiisu ka qabto kulanka Shakhtar ee caawa ee Champions League.
Shakhtar oo ka dhisan magaalada dagaalladu ka socdaan ee taalla bariga Ukraine ee Donetsk, ayaa waxa ay caawa foodda is dari doonaan Bayern Munich oo ay wada ciyaari doonaan wareegga 16ka ee Champions League.
Magaalada ay ka dhisan tahay Shakhtar waxa haysta kooxaha hubaysan ee ka soo horjeeda dawladda Ukraine, waxaanay taasi khasab ka dhigtay in ay si ku meel-gaadh ah kooxdu ugu guurto magaalada Lviv oo ku taalla galbeedka Ukraine, hase yeeshee waxa magaaladaas lafteeda waxa ka jiray rabshado yaryar, laakiin sida uu aaminsan yahay Lahm wax dhibaato ah kooxdiisu kalama kulmi doonto dhulka lagu ciyaarayo balse walaacoodu yahay xiddigaha reer Brazil ee kooxdaas u ciyaari doona caawa.
“Ciyaarta waxa loo raray magaalada gobolka galbeedka dalka, waxaanan aaminsanahay in si fiican loogu diyaar garoobay, wax mushkilad ahina dhici mayso” sidaas ayuu yidhi Kabtanka Bayern Munich, Philipp Lahm.
“Anigu kama walaacsani halka lagu ciyaarayo, waxa aanu rabnaa in aanu natiijo fiican kala soo noqono Ukraine. Laakiin waa in aanu digtoonaano, sababtoo ah koox jilicsani kuma jirto 16ka Champions League.
“Shakhtar waxay haysataa koox wanaagsan oo wakhti dheer isla qabsatay. Waxa ku jira ciyaartooyo badan oo Brazilian ah oo farsamo ahaan awood badan. Waxa intaa dheer, si fiican ayay u dhisan yihiin.” Sidaas ayuu yidhi Lahm.
Xiddigan reer Germany waxa uu xusay in ciyaartani noqon doonto mid adag.
Fikirkan waxa la wadaaga Lahm, difaacyahanka kale ee Holger Badstuber oo dhawaan ku soo noqday garoomada kadib muddo laba sannadood ah oo uu u jiifay dhaawac jilibka ka gaadhay.
Holger Badstuber oo isaguna la hadlay warbaahinta ayaa yidhi: “Qof waliba wuu garanayaa Shakhtar, waa koox si joogto ah ugu soo baxaysay Champions League muddo dheer, markaa waa in aanu ka digtoonaano oo aanu u diyaarsanaano, si fiicanna waanu u daraasayn doonaa” ayuu yidhi.
Bayern Munich waxa ay la ciyaaraysaa Shakhtar iyadoo kulankeedii ugu dambeeyey ee Sabtidii 8-0 ku karbaashtay Humburg.
Awdal vs Sanaag: Milicsiga Taariikh Kooban Oo Ay Xulalkoodu Soo Mareen
Official: QPR Oo Vargas Amaah Kagala Wareegtay Napoli
Messi: Waan Ku Faraxsanahay In Aan Jabiyo Rikoodhkii Raul